ရခိုင့်အတွေးအခေါ်: အသားဖြူချင်ရေ ရခိုင်သမ ညီမချေတိသို့….
အသားဖြူချင်ရေ ရခိုင်သမ ညီမချေတိသို့….
အဂု နောက်ပိ်ုင်း Cosmetics (အလှပြင်ပစ္စည်း) တိမှာ Mercury လို့ခေါ်ရေ လူ့အသားအရီမှာ ကင်ဆာဖြစ် နိုင်လောက်တေ ဓာတ်တိပါဝင်ရေ အသားဖြူလိမ်ဆီး (Whitening lotion) တိ ကကောင်းခေတ်စားလာစော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကေ ရင်ထဲမှာ ကျိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်လာလို့ ဒေဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါရေ။
မြန်မာနိုင်ငံ (ရခိုင်ပြည် အပါအဝင်) နန့် အာရှပိုင်းဒေသ နိုင်ငံတိမှာ “အသားဖြူမှ တော်ဝင်ရေ ထက်မြက်တေ လှပရေ” ဆိုရေ အယူအဆ ဇာပိုင်ပေါ်ထွန် လာရလေးလို့ ပြန်ကောက်ဖို့ဆိုကေ ဟိုးလွန်ခရေ နှစ်ပေါင်း ရာကျော်က ကိုလိုနီခေတ်ကိုပြန်ပြီးကေ ကြည့်ဖို့လိုပါရေ။
အနောက်နိုင်ငံသားတိ (အထူသဖြင့် ဥရောပသားတိ) စွော် ကိုလိုနီခေတ် တစ်လျှောက်လုံးမှာ အဖြူရောင်အသား ရွှေဝါရောင်ဆံပင် နှာတံချွှန် ရေရုပ်ရီပိုင်ရရှင် တိမှ ထက်မြက်တေ ထူးချွှန်ရေ မြင့်မြတ်တေ ဆိုရေအတွေးအခေါ်ကို အာရှ ၊ အာဖရိက နန့် အမေရိက ရို့မှာ နနောင်း ရိုက်သွင်းပခပနာ လူဖြူတိရဲ့ profile ကိုမြှင့်တင်ရာမှာ ကကောင်းအောင်မြင်ခခတ်တေ။
သမိုင်းနှောင်းပိုင်း ၂၀ရာစုပိုင်းမှာ ကိုလိုနီတီ ချန်ပခရေ လူဖြူ လူမဲ ခွဲခြားရေး လူမျိူရေး ပြသနာတိစွော် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ခခတ်စွော်ကို တွိရပါရေ။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူမည်းတိစွော် “ကျွန်” အဖြစ်နဲ့ ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်အထိ လူဖြူတိရဲ့ ဖိနှိပ်ခြင်းကို ခံခရကတ်တေ။ အလားတူပင် တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှာလေးသော့ အသားအရောင်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်တေ စနစ်ဆိုးစွော် ၁၉၉၆ လောက်ခါမှ အရင်းပြုတ်လားခစွော်ပါရာ။
ဖော်ပြခရေ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တိနန့် ရှေးဦးစွာဖော်ပြခရေ အသားဖြူလိမ်းဆီး တိနန့် ဇာပိုင် ဆက်စပ် ပါလေး လို့တွေးကောင်းတွေးနီကတ်ပါလိမ့်မေ.. ဒေပိုင်ပါ…
ရခိုင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလေးသော့ အသားအရောင် ခွဲခြားရေ လက်ခဏာ တိစွော်ကေ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရို့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရို့လောက်မှာပိုင် မပြင်းထန်တာလေ့သော့ ဟိနီပါရေ။ အသားအရောင်ကို မူတည်ပြီးကေ ခွဲခြားဆက်ဆံစွော်ဟာ ယင်းလူသား ၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူကို ပျက်ပြားစီပါရေ။ ဒေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန့် ကိုယ်ပိုင် အတွိအကြုံကို ဝီမျှချင်ပါရေ။
အကျွန်အငယ်ခါက ကျောက်ဖြူမြို့မှာ ကြီးပြင်ခစွော်ပါ။ ပင်လယ်နားမှာ နီယေအပြင် အမိဖက်ကအမျိုးက အသားမည်းရေအတွက် အကျွန်လေးသော့ မည်းမည်းချေပါရာ။ အသားကမည်းမည်း ပိန်ကပိန်ပိန် ကလိမ့်မချေ တစ်ယောက်အနေနန့် အကျွန့်ကိုယ်အကျွန် လှပါရေ လို့ ယောင်လို့တောင် မတွေးခရေ အပြင် တခြားသောသူတိက ဖော်ပြခြင်းလေ့ ဘဝမှာ တစ်ခါလေးသော့ မကြားဖူးခပါ။ “အသားဖြူဖြူချေနန့်လှလိုက်တေ” လို့ ဖော်ပြခံရတဲ့ ကလိမ်မချေတိကိုရာ အားကျတဲ့စိတ်နန့်ငေးကြည့်ရုံရာ တတ်နိုင်ခပါရေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်မူ မကြေနပ်မူ တိနန့် အကျွန့် မျက်နှာဟာ ရူံ့သထက်ရူံ့ပြီးကေ ရုပ်ဆိုးပြီးရင်းရုပ်ဆိုး ပြီးကေ ငယ်ဘဝတစ်လျှောက် ရုပ်ဆိုးမချေ နာမည်ရာ တွင်ခရပါရေ။
အင်္ဂလိပ်စာမှာ အမြဲတမ်းထူချွန်ခရေ အကျွန်စွော် ယင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုပင် အရင်းပြု စာသင်ရင်းနန့် ဘဝကိုရပ်တည်နိုင်ခပနာ ကံကောင်းစွာနန့် နိုင်ငံ တကာနန့် ရင်ဘောင်တန်းပြီးကေ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အတွိအကြုံတိ ရလာပြီးကေ ပညာအရည်အချင်းတိ ပိုတိုးများလာခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူတိ ရပါလတ်ပြီးကေ တီထွင်ကြံဆဥာဏ်တိ တိုးပွားလာခါ မျက်နှာမှာ အပြုံပန်း ဆင်ရကောင်မှန်းသိပါလတ်တေ။
အခုအချိန်ခါမှာ အကျွန်အငယ်ခါက အကျွန့် အသားအရေနန့် ရုပ်ရီ ကို ကြည့်ပနာ ခါးခါးသီးသီး ဆက်ဆံခရေ လူတိကို အကျွန့်ပညာနန့် ပြုံးပြီးကေ လှပနီတဲ့ အကျွန့်မျက်နှာကို မြင်ချင်စီပါရေ။
ရခိုင်သမ ညီမချေတိ… အသားညိုလို့ အသားမည်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ် မယုံမရဲ ဖြစ်နီကတ်လား…. အကျွန် အကြံကောင်းတစ်ခု ပီးပါရစီ။ နိစဉ်နိတိုင်း အိပ်ရာကနိုးတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်မှာကြည့်ပြီးကေ ပြုံးပြ ပြီးကေ “ငါကောင်းလှပါရေကော” လို့ စိတ်ကပြောပါ။
လူတစ်ယောက်၏ အလှအပစွော် အသားအရီနန့် ရုပ်ရီမှာ မူတည်စွော်မဟုတ်.. အရေးကြီးစွော်က ဥာဏ်ပညာ၊ အတွိအကြုံ နန့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူ ဖြစ်ပါရေ.. အသားဖြူမှစိတ်ဖြူစွော်မဟုတ်ပါ.. စိတ်ဖြူကေ အသားမဖြူတာလေးသော့ ဖြူစင်ရေ အသားအရီ ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာဖို့စွော် ဧကန်မလွဲပါရာ….
သန်းသန်း March 23, 2009 at 6:40 AM
for friend. March 23, 2009 at 10:16 AM
I suggest all rakhine girl to watch
America next top model program
to know every khin color have own beauty
ကောင်းမှန်ဘာရေ မမ ...ကျွန်တော် ကကောင်းချစ်နိန်ရေ ရခိုင်သမ ကလွေမေ ချေ တယောက်ဆိုကေ မိတ်ကပ် ရို့ နှခမ်းနီ ဆို့ စွာ တိ တခါလေ့ မရှိဘာ၊ အီးရေ နီရာဒေသ မှာ နိန် လို့ နှခမ်းတိကွဲကေ တခါတလီ သုံးဘာဆိုကေတောင် မဆို့ လို့ ပြောဘာရေ ၊၊ယကေလေ့ကောင်းကောင်း ရခိုင်သမချေ ပပီ သဘာဝအလှချေ နန့် ကောင်းကောင်းချစ်ဖို့ ကောင်းပါရေ ။။
Khaing March 26, 2009 at 11:40 AM
"တခုလဲ မဖြူဝါ..အသားက ပိတုန်းရောင်..ဆံပင်ကမဲနက်ရောင်၊
၀တ်ထားစော်လည်း အားလုံးအမဲ.ဇာမှာလဲ ဖြူစွာ"..
အသားမည်းကေ အဆီခဲ၊ ပြန်လို့ကြည့်ကေ အသည်းစွဲဆိုရေ စကားပုံကို ရင်းရခိုင်သမချေမကြားဖူးလို့ရှိပါဖို့။
ဖြူချောဆိုစွာက မရှိပါ။ ညိုချော၊ မဲချောလို့ရာ ဟိပါရေ။ ကျွန်တော်လည်း အသားညို လူချောချေတယောက်ပါရာ။ ကျွန်တော့် စော်ချေလည်း ညိုချောချေပါ။ သူ ကျွန်တော့်ကို အသားဖြူဖို့အတွက် ထိုထိုဒေဒေ မလိမ်းခိုင်းပါ။ ကြက်ဥရာ စားခိုင်းပါယင့်။ ယင်းအတွက်နဲ့ အသားဖြူချင်သူတိုင်း ကြက်ဥစားကတ်ပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါယင့်။